iOS 11.2 ichaunza nekuchaja nekukurumidza kwema 7,5 w isina charger | IPhone nhau
Sezvo Apple iri kuvhura betas nyowani, dzimwe dzenyaya dzinobva paruoko rweinotevera huru yekuvandudza yeIOS 11 yakawanikwa, chiitiko chinofanira kurova musika gore risati rapera. Parizvino iOS 11.2 iri mubeta, asi Apple yakatotanga kuyedza kuenderana nechaja 7,5W Qi.
Parizvino mhando dze iPhone dzinowirirana newadhi isina waya: iPhone 8, iPhone 8 Plus uye iPhone X inowirirana ne5w charger, asi sekuvimbisa kwaApple, kumhanyisa kurodha kweaya mamodheru kwaizowedzerwa mukuvandudzwa kweramangwana, zvimwe zvigadziriso zvinoita kunge zvichasvika munguva pfupi uye zvichadaro neIOS 11.2
Zvinoenderana nekuyedzwa kwakasiyana kunoitwa nechaja inogadzira RAVpower, ichishandisa iyo Belkin Qi charger inowanikwa muApp Store, charger ine rutsigiro rwe7,5 w yekuchaja kumhanya, iyo iPhone X yabva kubva 46% kusvika 66% yebhatiri mu Maminitsi makumi matatu, nepo iyo imwecheteyo modhi, ichiita mamwe majaja asingape 30 w kubhadharisa, yabva pa7,5% kusvika 46% muhafu yeawa. Kuita kuti bvunzo dzive dzechokwadi sezvazvinogona, Ndege modhi yakaremara muzviitiko zvese izvi.
Kutenda kutsigira 7,5w charger, iPhone 8, iPhone 8 Plus, uye iPhone X vanokwanisa kuchaja nekukurumidza kushandisa induction charger uye sezvataona mune bvunzo dzinoitwa neRAVpower, iyo nguva yekuchaja yakadzikiswa, asi ichiri kunonoka kupfuura mamwe madhizaini aripo pamusika.
Parizvino iyo Qi inoenderana nechaja inosvika ku15 watts, zvakadaro, Apple yasarudza iyo nguva Izvo zvinongoenderana chete nejaja iyo simba iri 7,5 w Pakutanga, kwete zvakati wandei zvichienzaniswa newazvino majaja, asi kuyedza kunokosheswa. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti isu tichafanirwa kumirira anotevera mazera e iPhone kuti tikwanise kunakidzwa nekukurumidza isina waya yekuchaja system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.2 ichaunza nekuchaja nekukurumidza kwema 7,5w mawadhi asina waya
Zvakawanda kana zvishoma nenguva yaunovhura yako asina waya majaja .. zvakangoitikawo sei
Ini handinzwisise, ini ndine chena belkin uye iyo yekuvandudza inei nekuita nekukurumidza? Mumwe munhu akanditsanangurira?
Via software mutoro waive wakaganhurirwa ku5w muPhones nyowani, asi neichi chigadziriso unogona kushandisa simba rese rinopihwa ne 7,5W charger senge iwe unayo.
Saka kana ndine 15W Belkin, iyo iPhone X haizondibhadharise, kana ichangobhadharisa sekunge ingori 7,5W chete?
Ichakubhadharisa pa7,5w maximum
Apple inoshanda pane itsva 3D sensor yekamera yekumashure